iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #7 by Dariussssss
Ngakho, sanibonani nonke. Igama lami ngingu uDavide futhi Ngikhathazekile entsha Forum Moderator. Ngacabanga ukuthi indlela engcono kakhulu kukhahlela-off umsebenzi lapha ukuvula ngalesi sihloko kanye to meet you bonke.
Sitshele ngawe, yini abake ucabanga kubalulekile.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: rikoooo, PADA52, I-ricbru, i-txrace
iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #14 by rikoooo
Siyakwamukela ku team Rikoooo,
I'am Erik the umdali kanye nomphathi we Rikoooo.com.
Ngingumfana uyajabula ngempela ukuba lapha, lena Forum yakho. uwena boss
Ngiyakwenza annouce e iphephandaba lethu elilandelayo ukutshela wonke umuntu ngale forum entsha.
Happy indiza wonke umuntu
iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #15 by andhar
I am an womculo Airplane Indonesia
Kuhle ukuhlangana nani nonke
iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule - iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #16 by Dariussssss
Ngiyabonga konke kude kangaka. Ithemba ukubona okuningi, okuthunyelwe okuningi futhi umsebenzi nokunye okuningi lapha esikhathini esizayo.
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 izinyanga ezingu-4 ezedlule Dariussssss.
iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #35 by FCAIR
Sawubona Zonke my name is Terry (FCAIR) I am umhlalaphansi USAF Crew Chief. Vele got nesithakazelo FSX neSIM ezindizayo ngemva kweminyaka eminingi. Great site entsha, okulandwayo awesome. Happy Flying kuwo wonke umuntu
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: rikoooo, Gh0stRider203
iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule - iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #36 by viscount
Hi - Angisona Johane kusukela oluseningizimu UK. Manje ngemva kokuthatha umhlalaphansi, flight simulator wami wokuqala elaliphethwe on a ZX81, balayisha by tape, futhi kwakuba B737 (kahle altimeter kanye ASI) emelelwa ihluzo blocky kakhulu ezindizayo phakathi block A no block B in black and white - futhi uma Kwaba kusukile lokho kwesokudla wabona "ezinobuhle", elinye blob emnyama ebizwa C. Inspiring Izinto. Kusukela ngaleso sikhathi ngiye ayenesizathu Flightsim Microsoft bukhicite, bese bedlulela ngokusebenzisa ezihlukahlukene amakhompyutha i 8086 ngokusebenzisa 384, 486, Pentium, plus ezimbalwa kakhudlwana, I7 yami yamanje. Ngine ilayisensi yangasese ku enginithanda ambalwa namashumi on 152s futhi PA28s - engasekho wamanje ngenxa izindleko ezindizayo lapha e-UK. Indodana yami waphinde wasebenzisa Flightsims, walithola bug ukundiza, futhi manje nge 4000 amahora ngaphansi ibhande lakhe phezu (real) A319 / 320s nje ukuya ithikithi uCaptain wakhe. Uzithela Rickoooo by the freeware seziqhingi zaseCanary Islands ezinobuhle okuyinto umxhwele kakhulu - ngakho Sibonga eziningi lokho. Great ukubona i ekhasini isiNgisi njengolimi nakuba siphila kungekho angaphezu kuka 50 evela eFrance kahle ulimi lwabo ikude omuhle.
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 izinyanga ezingu-4 ezedlule viscount.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: rikoooo, i-alogie
iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #37 by rikoooo
Sawubona FCAIR futhi viscount,
Siyabonga isethulo sakho futhi siyakwamukela esithangamini entsha, thina nomdlandla kakhulu futhi bayakujabulela ukuba babe kuwe lapha, unganqikazi post izihloko ezintsha futhi ucele usizo emphakathini. futhi, uma ufuna ukusiza abanye bekungaba kuhle, ulwazi lwakho wamukelekile kakhulu lapha, futhi thina angathanda ukuba ezinye indlela-ukuze, flying izifundo, tutorials nokunye posted in the forum. Nanoma iliphi igalelo uyokwenza umphakathi happy.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: viscount, FCAIR
iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #39 by FCAIR
Kuleli qophelo, nginjengomuntu okuningi umfundi njengoba engake. Kungase kuthathe kimi kancane ukuze uthole zonke ins kanye nasemigwaqweni of FSX kodwa kunini angikwazi ukusiza othile Kuyoba injabulo enkulu ngenze kanjalo.
Blue Skies wonke umuntu ..
iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #44 by Dariussssss
Nakulokhu futhi, Siyakwamukela ku Rikooo.
iminyaka 2 3 izinyanga ezedlule #153 by PAYSON
Hiya, igama lami screen igama kuyinto PAYSON. Bengilokhu usebenzisa ikhompyutha simulators isikhathi eside impela manje, eyaqala ikhophi esetshenziswa Ubisoft sika Sturmovik IL2. Bathuthela iminyaka 10 e WarBirds (empeleni kwasiza nabo abanikeze asebenza nabo of a fighter babefuna ukwethula umdlalo. Ngiphinde eguga ezinye nomngcele ukudlala combat sims ezinamandla nakakhulu Ubisoft sika. Ngathuthela on eminyakeni engaba ngu-5 e World of Tanks, namanje ukudlala it. (uthola ezibizayo) ngiye wasebenzisa FSX iminyaka engaba ngu-8 noma 9 futhi wamthanda format zabo. Ngithathe namanje abathintekayo ne kumbe futhi namanje adubule-em-up in Ubisoft. Manje engiye ngawathola mayelana wena abantu, kuhle ukuba ukhetho olukhulu izindiza ikwazi ukundiza babe.
Isikhathi ukudala page: 0.281 imizuzwana